(Liverpool) 05 Maarso 2021. Tababaraha kooxda Chelsea ee Thomas Tuchel ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay guushii ay kooxdiisu ka gaadhay Liverpool, kaddib ciyaartii ku dhax martay xalay garoonka Anfield.
Chelsea ayaa saddexda dhibcood ka soo heshay kooxda Liverpool oo ay ku booqatay garoonka Anfield, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 0-1, ciyaar qayb ka aheyd kulamada horyaalka Premier League, xilli Thomas Tuchel uu wali guuldarro la’aan yahay tan iyo markii uu la wareegay shaqada tababarka ee naadiga reer London.
Haddaba Thomas Tuchel ayaa ciyaarta kaddib u sheegay warbaahinta:
“Waxaan ku sugneyn fagaaraha dahabiga ah kaddib guushii aan ka gaarnay Newcastle, sidaa darteed ma lumin karno diirad saarideena, marka loo eego jadwalka kulammada, waxa kaliya oo aan sameyn karno, waa inaan ugu diyaar garowno kulan kasta heerka ugu sarreeyo, sababtoo ah horyaalka kuuma ogolaanayo inaad heerkaaga hoos u dhigto.”
“Weli waxaa jira 11 kulan, mana jiraan wax la go’aamiyay, waxaan u baahanahay inaan horey u sii socono.”
Intaas kaddib Thomas Tuchel ayaa ka hadlay guulihiisa xiriirka ah ee kooxda Chelsea, wuxuuna yiri:
“Aad ayaan ugu faraxsanahay, markaan runta ka hadlo, waxaan ka xumahay barbarihii aan la galnay Southampton, sababtoo ah kuma aanan faraxsanayn luminta laba dhibcood, iyo qaabka aan ku luminay labada dhibcood.”